संयुक्त राज्य अमेरिका - ALinks
संयुक्त राज्य अमेरिका मा लेख
चीनका लागि अमेरिकी मिसनले बुझ्दछ कि धेरै भिसा आवेदकहरूले भिसा आवेदनहरूको लागि प्रशोधन शुल्क तिर्छन्। र तिनीहरू केवल भिसा अपोइन्टमेन्टको लागि निर्धारित हुनको लागि बसिरहेका छन्। आश्वस्त हुनुहोस्, यसै बीच, कि अमेरिकी मिशन को विस्तार हुनेछ
नोभेम्बर 20, 2021 शुभम शर्मा विद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका को धेरै जनसंख्या भएको छ। यो कुल 50 राज्यहरु छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि काम गर्नका लागि उत्तम र उत्तम देश हो, किनकि यसमा विश्वका केही प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। यदि कोही
मेक्सिको बाट संयुक्त राज्य अमेरिका को भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 10, 2021 शुभम शर्मा मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, भिसा
मेक्सिको बाट यात्री जो संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ पहिले एक भिसा प्राप्त गर्नु पर्छ। एक भिसा जारी गर्न सक्नु अघि, यो एक आवेदन, कागजात, र साक्षात्कार प्रक्रिया को माध्यम बाट जानु पर्छ। यसको अतिरिक्त, नामहरु भेला हुन्छन् र एक मा क्रस जाँच गरीन्छ
मिल्वौकी मा कसरी जागिर पाउने?
सेप्टेम्बर 21, 2021 शुभम शर्मा अमेरिकी, जब, संयुक्त राज्य अमेरिका
मिल्वौकी संयुक्त राज्य अमेरिका मा मिशिगन को पश्चिमी किनार मा एक शहर हो। यो राम्रो संग यसको ब्रुअरीज को लागी परिचित छ, जस मध्ये धेरै पर्यटन प्रदान गर्दछ कि बियर व्यापार मा शहर को इतिहास को विवरण। हार्ले डेभिडसन संग्रहालय, जो Menomonee अनदेखी
Jacksonville मा जागिर कसरी प्राप्त गर्ने?
सेप्टेम्बर 21, 2021 शुभम शर्मा अमेरिकी, अमेरिका, जब, संयुक्त राज्य अमेरिका
२०२० को रूपमा, ज्याक्सनभिल्ला फ्लोरिडा को सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको शहर र सान्दर्भिक संयुक्त राज्य अमेरिका मा क्षेत्र द्वारा सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो डुवल काउन्टी को काउन्टी सीट हो, जस संग स्थानीय सरकार १ 2020 मा मर्ज भयो।
क्यालिफोर्नियामा कसरी काम पाउने?
सेप्टेम्बर 16, 2021 एन्टिका कुमारी जब, संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकी अध्यागमन परिषदका अनुसार क्यालिफोर्नियामा १० करोड भन्दा बढी आप्रवासीहरूको घर छ। यो यसको जनसंख्याको एक चौथाई भन्दा बढी र राष्ट्रिय औसत भन्दा दुई गुणा लागि लेखांकन छ। आप्रवासीहरू पनि राज्यको %०% भन्दा बढीको लागि जिम्मेवार छन्
संयुक्त राज्य अमेरिका बाट स्पेन को लागी एक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अगस्ट 29, 2021 शुभम शर्मा स्पेन, यात्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भिसा
स्पेन र अन्डोरा को भिसा मुक्त यात्रा तीन महिना सम्म अमेरिकी नागरिकहरु को लागी उपलब्ध छ। स्पेन मा सरकारी नियम एक फिर्ता वा जाँदै टिकट वा पैसा को प्रमाण को आवश्यकता हुन सक्छ, समय मा स्थिति मा निर्भर गर्दछ। अमेरिकन जो
अमेरिकाको लागि पर्यटक भिसा कसरी पाउने?
अगस्ट 3, 2021 एन्टिका कुमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, भिसा
पर्यटक भिसा ती आगन्तुकहरूलाई दिइन्छ जो छुट्टीको लागि देश भ्रमण गर्न वा दृश्यहरू हेर्न चाहान्छन्। यी भिसाहरू निश्चित समयका लागि मान्य हुन्छन् र विदेशी आगन्तुकलाई अनुमति दिदैनन्
अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी भिसा
जुलाई 9, 2021 शुभम शर्मा अफगानिस्तान, यात्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भिसा
संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका पछि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो। यो संसारमा बाँच्नको लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो तर अमेरिकामा बस्नको लागि धेरै महँगो छ। त्यहाँ एक छ